Soo dejisan HipChat 4.30.6.1676 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: HipChat
HipChat – wargeeye shirkad ah oo abaabulaya geedi socodka shaqada iyo hagaajinta isdhexgalka shaqaalaha. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto qolal xiran oo furan oo loo qeybin karo mawduucyo, mashruucyo ama kaqaybgalayaasha martigelinaya. HipChat waxay leedahay wax kasta oo aad u baahato si aad uhesho koox wada sheekaysiga iyo faylka wadaaga iyo sidoo kale isku xirnaanta kordhinta si aad u hirgeliso dukumiintiyada wada hadalka. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto wicitaan fiidiyo ah oo wada hadal ah oo ka qaybgalayaasha kale ay ku xirmi karaan haddii loo baahdo. HipChat waxay taageertaa isdhexgalka alaabteeda gaarka ah sida Jira, Confuence iyo Bitbucket iyo sidoo kale adeegyada saddexaad ee ka midka ah Google Drive, Dropbox, GitHub, Sketchboard, iwm Sidoo kale HipChat waxaa ku jira qalabyo looga dhigo ogaysiinta laga bilaabo chat ama lagu siiyo kaliya haddii magaca qof gaar ah lagu xusay.
Qeybaha kooxeed iyo wadaagista faylka
Isku xirka kordhinta si aad u wada hadashid
Fiidiyo kooxeed ayaa wacaya waxqabadka ku habboon
Is-dhex-galka adeegyada adeega saddexaad
Soo dejisan HipChat
Faallo ku saabsan HipChat
HipChat Xirfadaha la xiriira